Dhamma simba: chii, chinoitei uye ndeapi mapurojekiti anayo | Green Renewables
ChiGerman Portillo | | Photovoltaic Solar Energy
Simba rezuva rinowedzera kukurudzirwa nemakambani nemapurojekiti anoedza kuita kuti simba iri rive chimwe chinhu chakagadziridzwa. Imwe yemakambani anobheja pane simba rezuva ndeye Dhamma simba. Boka reDhama Energy rinogadzira, rinovaka uye rinoshanda zvirimwa zvesimba rezuva.
Muchikamu chino tichakuudza nezve nhoroondo yeDhamma simba, mapurojekiti anonyanya kukosha uye kuti inoshanda sei.
2 Dhamma energy mapurojekiti
3 Chimiro uye mari yeDhamma simba
4 Hydrogen kugovera muSpain
5 Dhamma simba uye mavakirwo ayo
Dhamma Energy inoshanda muFrance neSpain yakawanikwa muna Gumiguru 2021 neEni gas e luce, chikamu che100% cheEni SpA. Dhamma Energy parizvino ine 120 MWp solar power plant muFrance.
Dhamma Energy yakatanga kushanda muFrance neSpain anopfuura makore gumi apfuura, kwayakagadzira mapurojekiti ayo ekutanga ezuva. Zvadaro, Dhamma Energy yakawedzera zviitiko zvayo muFrance, kwayakavaka yayo yekutanga solar park.
Muna 2013, Dhamma Energy yakavhura imwe kambani muMexico, iyo yakagadzira 470 MWp solar power plant uye parizvino ine portfolio ye2 GWp. Zvichakadaro, boka iri riri kushanda pachirongwa chayo chekutanga photovoltaic muAfrica, 2 MWp solar park muMauritius, iyo yakavhurwa muna 2015.
Parizvino, Dhamma Energy yapedza kuvandudzwa kwe650 MW yemagetsi emagetsi emagetsi, anowanikwa zvakanyanya muMexico, France neAfrica. Dhamma Energy parizvino ine 2 GWp pombi iri kushanda muMexico. Iyo Dhamma Energy timu inoumbwa nemaneja epurojekiti, mainjiniya uye nyanzvi dzehunyanzvi muchikamu chephotovoltaic.
Dhamma energy mapurojekiti
Kwemakore, neruzivo rwavakawana, vave mutungamiri akazvimiririra mukugadzirwa kwemagetsi e photovoltaic uye kugadzirwa kwesimba rezuva. Sevagadziri, vavaki, vashandisi uye vanoisa mari yezvirimwa zvephotovoltaic, vanovhara hupenyu hwese hwepurojekiti: kubva pakutsvaga nyika kusvika pakugadzirisa uye kutungamirirwa kwe photovoltaic park.
Chikwata ichi chinovhara matanho ese ezuva PV purojekiti yekuvandudza, kusanganisira zvidzidzo zvekugoneka, topographical ongororo, zvidzidzo zvezvakatipoteredza, kuongororwa kwesaiti, pfungwa dzekuisa, kuongororwa kwehunyanzvi, kuongororwa kwepolicy uye mutemo, kugona kwemari, kumisikidzwa kwekutenga magetsi (PPA).
Dhamma Energy inoshanda pamwe nevashambadziri vepasi rese (photovoltaic modules, inverters, kuchengetedza masisitimu). Imwe yeminda yebasa reDhamma Energy ndiyo yekuvaka manejimendi yemapurojekiti ephotovoltaic. Dhamma Energy inoperekedzawo vadyidzani vayo vekudyara kusvika pachikamu chekutanga chepurojekiti.
Shanda nenyanzvi uye vanoisa vane ruzivo rwakakura mumunda. Dhamma Energy yakabudirira kugadzira uye kuvaka pamusoro pedenga remba uye pasi pezuva mapurojekiti ari kushanda parizvino.
Chimiro uye mari yeDhamma simba
Chimwe chezvikamu zvakakosha zvepurojekiti iyi kuronga uye kupa mari. Pane iyi kambani yemagetsi ezuva, vane ruzivo, ruzivo uye hunyanzvi hwekuchengetedza mari uye kuchengetedza mari yakabudirira yepakati nepakati uye hombe magetsi ezuva pasi pemitemo yakasiyana. Chiitiko chake chinobata equity financing pamwe chete nechikwereti chenguva refu chinobata nemabhanga ekutengesa uye masangano mazhinji.
Ivo vanobatanidzwa muhupenyu hwese kutenderera kweprojekiti uye vanotarisira kutanga kwe zvirimwa zvemagetsi ezuva uye kana vangosvika padanho rekutengesa, vanogadzira nekushandisa mapurojekiti aya. Kugadzirwa kwesimba rezuva chikamu chebhizinesi.
Parizvino vane huwandu hwemagetsi ezuva ari kushanda, kusanganisira yepakati uye yakakura pasi-yakaiswa zvidyarwa, pamwe nepamusoro pedenga remba, iri kunyanya muFrance.
Hydrogen kugovera muSpain
Kugoverwa kwegreen hydrogen mumapurojekiti eEurope kuchatanga muSpain nekutora chikamu kweEnagás, Naturgy uye Dhamma Energy. Iyo HyDeal Ambition purojekiti ine chinangwa chekugadzira European yekugovera cheni yegirinhi hydrogen pamitengo yemakwikwi muSpain, uko kugadzirwa kwemagetsi kuchatanga gore rinouya, nechinangwa chegumi megawati pagore.
Kwakabva iyi renewable simba sosi kugadzirwa kwegreen hydrogen kuburikidza ne solar electrolysis, kuburikidza neiyo mitengo yemakwikwi inogona kuwanikwa kuburikidza nechirongwa, icho chichatora matanho ekutanga muna 2022 uye chine chinangwa chekusvika 85 GW. yesimba rezuva uye 67 GW. zvesimba rezuva. watts emagetsi ekugadzirwa kwemagetsi muna 2030.
Izvi zvinomiririra 3,6 miriyoni matani egreen hydrogen pagore, yakaenzana nemwedzi miviri yemafuta ekushandisa muSpain, ayo achagoverwa kuburikidza neakasikwa gasi rekuchengetedza uye ekufambisa network emakambani ari kutora chikamu muchirongwa ichi. Mutengo kumutengi unofungidzirwa pa1,5 EUR/kg, iyo inofananidzwa nemutengo wezvino wefossil fuels asi, mukudzoka, haigadziri kusvibiswa.
Mukuwedzera kumakambani matatu eSpain Enegás, Naturgy uye Dhamma Energy, mamwe makambani makuru kubva kune dzimwe nzvimbo dzeEurope ari kutorawo chikamu, akadai seFalck Renewables (Italy), Gazel Energie (France), GTTGaz (France), HDF Energie (France) , Hydrogen de France , McPhy Energy (France), OGE (Germany), Qair (France), Snam (Italy), Teréga (France), Vinci Construction (France)… kusvika kumakambani makumi matatu anotora chikamu. Aya makambani anobva muzvikamu zvakasiyana zvakaita sekuvandudzwa kwezuva, kugadzira michina yemagetsi emagetsi, mainjiniya, pamwe nemari yezvivakwa nevarairidzi.
Dhamma simba uye mavakirwo ayo
Gore rino 2021 mumwedzi waChivabvu, Dhamma simba rakakumbira mvumo yekuiswa kwemagetsi kweiyo yakakwira voltage plant inonzi "Cerrillares I photovoltaic solar plant". Kuvandudzwa kwepurojekiti, iyo ichave iri pakati pemaguta eJumilla neYecla, inomiririra mari inofungidzirwa ye30 miriyoni euros, iyo mamiriyoni makumi maviri nemasere emadhora anoenderana ne-low-voltage magetsi kuiswa kwe photovoltaic solar plant pasi, inoteverwa nehorizontally pamwe chete neaxis imwe.
Kune rimwe divi, miriyoni imwe yemaeuro ichaiswa mumitsara yekutapurirana yekunze kuti ibvise simba rinogadzirwa (1 metres kureba) uye 12.617 euros muzviteshi zvishoma. Iyo solar park inotora huwandu hwe95 mahekita uye, kana yangoshanda, ichagadzira 97,5 GWh yemagetsi pagore. Kugadzirwa uku kwakafanana nekudyiwa kwemhuri dzinosvika zviuru makumi matatu.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve Dhamma simba uye mapurojekiti ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Photovoltaic Solar Energy » dharma energy